यसरी गरिंदैछ नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन (पर्यटनमन्त्री भट्टराईको मन्तव्यको पूर्णपाठसहित) « Naya Page
यसरी गरिंदैछ नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन (पर्यटनमन्त्री भट्टराईको मन्तव्यको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, १४ पुस । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को यही जनवरी १ (पुस १६ गते) भव्य रुपमा उद्घाटन हुने भएको छ । उद्घाटन समारोहमा चीन, भारत, जमैका, म्यान्मारलगायत देशका पर्यटनमन्त्रीहरु सहभागी हुनेछन् भने १८ देशका ३५ भन्दा बढी पत्रकारको उपस्थिति रहने जनाइएको छ ।
भ्रमण वर्षको तयारीबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यले उद्घाटननको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन् । जनवरी १ अर्थात पुस १६ गते दिउँसो ४ बजे बाट औपचारिक कार्यक्रम शुरु हुने उनले जानकारी दिए । उद्घाटन समारोहमा सामाजिक संघ सस्था, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतले मार्च पास गर्ने उनले बताए ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष कुनै मन्त्रालयको मात्र कार्यक्रम नभई सम्रग नेपालको कार्यक्रम भएकाले सबैले उत्सबको रुपमा मनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘सिंगो देश भ्रमण वर्षको आयोजक हो । सबै क्षेत्र यसका आयोजक हुन्’ उनले भने ‘भ्रमण वर्षले नेपाल स्थिर, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको सन्देश विश्वमा जान्छ ।’
‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को तयारीको सन्दर्भमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ सचिवालयले १४ पुस २०७६ मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
२) यहाँहरुलाई थाहा छ, सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ घोषणा गरेको छ । वास्तवमा देशभित्र भएका ती छलफलहरु २० लाख पर्यटक कसरी भित्र्याउने ? केवल त्यसमा मात्रै केन्द्रित थिएन । राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यो भ्रमण वर्षलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा कसरी मनाउन सकिन्छ ? राष्ट्रिय महाअभियानको रुपमा कसरी लैजान सकिन्छ ?
के के गर्दा पर्यटनका लागि राष्ट्रिय मनोविज्ञान तयार हुन्छ ? र, हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा राखेका दीर्घकालीन योजना र सपनाहरु कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने प्रमुख आधार पर्यटनलाई कसरी बनाउन सकिन्छ ? आर्थिक र सामाजिक असमानताहरुको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको बिकास गरेर समतामुलक समाज निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको कस्तो योगदान हुनेछ । हाम्रो ध्यान र छलफल त्यतातिर केन्द्रित थियो । र, त्यसै तर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
९) ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’को तयारीको सन्दर्भमा सहयोग पुर्‍याउने बिभिन्न मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरुप्रति म आभार प्रकट गर्दछु । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को सचिवालयलाई धन्यवाद भन्न चहान्छु । बिभिन्न सरकारी निकाय, पर्यटनसँग सम्बद्ध बिभिन्न संघ, संगठन, पर्यटन व्यवसायीहरु, नीजि क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघ संस्थाहरु, समग्र नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सामाजिक संघ–संगठन, स्वंयसेवी संस्थाहरु सबैलाई धन्यवाद भन्न चहान्छु । साथै आगामी दिनमा पनि यहाँहरुको यस्तै साथ, सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा समेत व्यक्त गर्दछु ।